Zavamananaina an-dranomasina: toetra, karazany, zavamaniry ary biby | Green Renewable
Portillo Alemanina | 21/09/2021 12:43 | Tontolo_iainana
Amin'ny natiora dia misy karazan-javaboahary samihafa arakaraka ny toetrany sy ny tontolo iainana ahitana azy. Ny iray amin'ireo tontolo iainana dia ny an'ny ranomasina. Ireo tontolo iainana an-dranomasina dia ireo izay mampiantrano fiainana be dia be sy loharanom-pahalalana isan-karazany sy goavambe amin'ny zavamaniry, biby, zavamiaina bitika ary molekiola. Na dia ny fisehoan'ny tontolo iainana an-dranomasina Mety ho toa homogène izy io, io dia iray amin'ireo tontolo iainana misy heterogène indrindra eto an-tany. Samy manana ny mampiavaka azy avy amin'ny tsato-kazo ka hatrany amin'ny tropika manerantany. Misy vondron'olona velona an-tapitrisany monina ao amin'ireo tontolo iainana ireo ary mandrafitra toerana feno fiainana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana an-dranomasina.
1 Inona avy ireo tontolo iainana an-dranomasina
3 Flora sy biby ao amin'ny tontolo iainana an-dranomasina
4 Karazana ekosistia an-dranomasina
Inona avy ireo tontolo iainana an-dranomasina
Ny tontolo iainana an-dranomasina dia karazan-javaboary anaty rano, miavaka amin'ny fananana rano masira ho zava-dehibe indrindra ao aminy. Ny ekosistia an-dranomasina dia misy ny tontolo iainana isan-karazany, toy ny ranomasina, ranomasina, heniheny sira, haran-dranomasina, rano morontsiraka marivo, lohasaha, farihy ranomasina masira amoron-dranomasina, morontsiraka be vato, ary ny morontsiraka.
Araka ny azontsika an-tsaina, karazana ekosistia an-dranomasina marobe miaraka no manohana fahasamihafana isan-karazany ny zavamaniry sy biby. Amin'ny ampahany manaraka dia ho hitantsika ireo zavamaniry an-dranomasina sy vondrona biby an-dranomasina mandrafitra ny harena voajanahary an'ireto tontolo iainana ireto, sy ny toetra ara-batana sy simika lehibe mamaritra azy ireo.
Ny fanangonana ireo tontolo iainana an-dranomasina rehetra dia mitana ny 70% amin'ny velaran'ny tany. Ny ekosistia an-dranomasina dia zaraina amin'ny faritra biogeographic samihafa. Izy ireo dia tafiditra ao amin'ny vondrona ekosistia anaty rano. Izy ireo dia misy rano miaraka amin'ny sira levona ho singa lehibe indrindra. Ny haavon'ny rano masira dia ambony noho ny an'ny ekôstôlista anaty rano velona hafa, izay miantoka ny fahaveloman'ny zavamaniry sy biby an-dranomasina izay mifanaraka amin'ity hakitroky ny rano ity.
Misy karazany roa ny faritra, miankina amin'ny fahazoana tara-pahazavana, hanavahana ny faritra mamiratra sy ny faritra tsy manazava. Ny fiasa ara-tontolo iainana ara-tontolo iainana an-dranomasina dia miankina betsaka amin'ny onjan-dranomasina, ny asan'ny onjan-dranomasina dia miorina amin'ny fanentanana sy fitaterana otrikaina isan-karazany, mba hahafahan'ny flora sy ny biby monina ao amin'ireto tontolo iainana sarotra mivelona ireto.
Ny tontolo biolojika an-dranomasina dia loharanon'ny harena biolojika goavambe, voaforona anton-javatra biolojika samihafa, toy ny zavamananaina (zavamaniry) sy ny mpanjifa voalohany (trondro sy molotra), mpanjifa faharoa (trondro hazandrano kely) ary mpanjifa tertiary (trondro hazandrano lehibe). Ny habe) ary ny zavamananaina (bakteria sy holatra) simba. Ho setrin'izany, ny antony abiotika sasany dia mamaritra ny mampiavaka ireo tontolo iainana voajanahary ireo, toy ny ny mari-pana, ny sira ary ny tsindry ny rano ao aminy ary ny habetsaky ny hazavan'ny masoandro azony.
Flora sy biby ao amin'ny tontolo iainana an-dranomasina
Ny zavamaniry tsy tambo isaina, ao anatin'izany ireo karazan-drano milentika sy mipoitra ary karazana mitsingevana, dia mandrafitra ny zavamananaina manan-karena zavamananaina rehetra. Mifandray mivantana amin'ny toetra ara-batana sy simika amin'ireo karazana tontolo iainana an-dranomasina monina ireo, ireo karazana ireo haneho endrika fiainana na hafa izy ireo ary hanana filàna lehibe sasany koa.
Ny ahidrano dia zavamaniry tsara eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Fianakaviana, genera ary karazany maro karazana no mahatonga ny tontolo iainana anaty rano tototry ny fiainana sy ny loko, ary mizara azy ireo ho ahidrà mena, na maitso fantatra matetika. Ny sasany mikraoskaopy (diatoms sy dinoflagellates), fa ny sasany kosa dia heverina ho makroalga, indrindra ny ahidrano voahodidin'ilay karazana Macrocystis. Ny ahidrano dia mizatra hatrany amin'ny mari-pana sy ny toetra ara-batana sy simika hafa amin'ny rano izay itomboany sy iainan'izy ireo, ary zaraina amin'ny ekosistia an-dranomasina amin'ny faritra rehetra manerantany.
Ankoatry ny ahidrano, ny zavamaniry misy ny tontolo iainana an-dranomasina dia misy karazana zavamaniry marobe, ao anatin'izany ny antsoina hoe ahidrano (fianakaviana voninkazo misy peratra, Cymodoceaceae, Ruppiaceae ary Posidoniaceae), izay hany zavamaniry voninkazo amin'ireo tontolo iainana ireo; honko (anisany ala honko: mangahazo Rhizophora sy honko fotsy: Laguncularia racemosa sy karazana hafa) ary fitoplankton betsaka.
Ny ranomasina, ny morontsiraka ary ny tontolo iainana an-dranomasina hafa dia mandrafitra ny toerana onenana isan-karazany biolojika indrindra eto an-tany, ny biby amina vondrona samihafa, ny fianakaviana ary ny karazam-biby dia miara-miaina anaty fifandanjana biolojika. Vertebrates sy invertebrates lehibe sy kely, toy ny zavamiaina bitika kely ihany, dia miara-miaina izy ireo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ireto avy ireo karazana biby hita izay hitantsika:
biby mampinono Afaka mahita karazan-trozona rehetra isika toy ny trozona manga, ny trozona fotsy, trozona sperm, orcas, dolphins ... sns.
Reptiles: Toy ny bibilava an-dranomasina, sokatra maintso, sokatra hawksbill ... sns.
Vorona: Aiza no ahitantsika pelikanina, voromahery, akoho amoron-dranomasina, osprey ... sns.
Trondro: Eto isika dia afaka mahita ny karazana sy fanasokajiana trondro rehetra toy ny trondro boloky, trondro puffer, trondro mpandidy, trondro boaty, trondro sergeant, trondro zazakely, trondro vato, hazandrano, trondro lolo, tokana, trondro anjely, taratra, sardinina, teris … Sns.
Karazana ekosistia an-dranomasina
Tany mando: Izy io dia manondro ny fidirana amin'ny helodrano na renirano izay ambany kokoa ny salinity noho izay hitantsika any amin'ny ranomasina avo. Azo lazaina fa faritra eo anelanelan'ny rano masira sy rano madio izy io. Tena faritra lonaka izy ireo.
heniheny: Faritra misy rano sira na lagoon izy ireo. Tany izay mandray rano avy amin'ny ranomasina sy renirano, milamina be ny rano ary zara raha misy mihetsika. Amin'ny maha toeram-ponenana azy dia manome loharano maro ho an'ny trondro, karazana mollusk, ary bibikely isan-karazany.
Estuary: Izy io no loharano misy ny renirano amoron-tsiraka, misy fiovana amin'ny fahamasinana, mandray hatrany ny renirano Aguadulce. Ny faharatsiana mety ho hitantsika dia ny foza, tiritra, bibilava ary izaho sy ny karazam-borona aza, ary koa ireo karazana hafa.
Honko: Izy ireo dia ala mivelatra eo amin'ny làlambe afovoany eo anelanelan'ny lohasaha sy ny ranomasina. Ny zava-maniry lehibe indrindra dia ala kely zatra ny rano mangatsiaka. Ao amin'ny rano honko dia manana trondro, makamba, na biby mandady isan-karazany koa isika, izay mampiasa ny hazo ho fialofana na ho sakafo tsotra fotsiny.
Meadows: Rano amoron-dranomasina izy ireo ary manodidina ny 25 m ny halaliny, tsy dia matanjaka ny onja ary ny renirano dia saika tsy misy antsanga. Ny iray amin'ireo lahasa lehibe ampiasain'ny fandriana ahidrano dia ny fisorohana ny fikaohon-tany eny amoron-dranomasina.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ny tontolo iainana an-dranomasina